भिसा पाउन के गर्नुपर्ला ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
म युएस सिटिजन हुँ । मैले एक नेपाली युवतीसँग विवाह गरेको छु । मैले इमिग्रेसन पेटिसन प्रोसेस गरेर दुई महिनाअघि उसको अन्तरवार्ता काठमाडौंको युएस एम्बेसीमा पनि भयो । एम्बेसीले एड्मिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङ भनेर केही जबाफ अहिलेसम्म दिएको छैन । के गर्ने होला ? र, कसरी भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ होला ? जबाफका लागि धन्यवाद ।
साधारणतः एम्बेसीमा भिसा अन्तरवार्ता भइसकेपछि तीन कुरा हुनसक्छन्– (१) भिसा एप्रुभ गरी पासपोर्ट लिनका लागि डेट दिनेछ, (२) एडिसनल डकुमेन्टहरु माग्न सक्छ, वा (३) एड्मिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा राख्न सक्छ । कुनै पनि भिसा एप्लिकेसनलाई अन्तरवार्तापछि एड्मिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङ (एपी)मा राखेपछि कति समयभित्रमा एपी कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुनै नियम वा पोलिसी छैन । अहिलेसम्म देखिएको प्राक्टिसमा एभरेजमा दुई महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि भिसा एप्लिकेसन पेन्डिङ भएको देखिएको छ । कुनै पनि भिसा एप्लिकेसन एपीमा रहने कारण (केस बाई केस) कुनै पनि हुन सक्छ । ब्याकग्राउण्ड चेकदेखि भिसा एप्लिकेसनको जेन्यूननेस वा अथेन्टिटीसिटी कुनै पनि हुनसक्छ । तपाईंको केसमा समय–समयमा युएस कन्सुलेट, काठमाडौंमा इन्क्वायरी गर्ने सुझाव छ ।
एसाइलीको स्टाटस प्राप्त होला ?
मेरो एसाइलमको निवेदन स्वीकृत भएको ६ महिना भयो । अहिले मेरो विवाह हुने कुरा चलिरहेको छ । मेरो हुनेवाला श्रीमतीको केही पनि भिसा छैन । उनी दुई वर्षअघि टुरिष्ट भिसा लिएर आएर त्यसै बसेकी छिन् । यदि मेरो विवाह भयो भने के मैले कुनै निवेदन उनको लागि पेश गर्न सक्छु होला ? अर्थात् एसाइलीको स्टाटस उनले पनि पाउन सक्छिन् कि ? उत्तरका लागि धन्यवाद ।
– इन्द्र, अमेरिका
एसाइलीको स्पाउस र अण्डरएज (२१ वर्ष नपुगेका) चिल्ड्रेनले पनि डेरिभेटिभ एसाइलीको स्टाटस पाउने अमेरिकाको एसाइलमसम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको छ । तर, सो स्टाटस पाउनका लागि त्यस्तो नाता वा रिलेसन प्रिन्सिपल एसाइलीको एसाइलम एप्लिकेसन स्वीकृत हुनुअगावै स्थापित भइसकेको हुनुपर्नेछ । अर्थात् एसाइलम एप्लिकेसन एप्रुभ हुनुअगावै वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइरहेको हुनुपर्नेछ । एसाइलम एप्लिकेसनको एप्रुभलपछि विवाह भई स्पाउसल सम्बन्ध् कायम भएको अवस्थामा सो स्पाउसले डेरिभेटिभ एसाइली स्टाटस पाउन सक्दैन । त्यसैले तपाईंको केसमा तपाईंको श्रीमतीले डेरिभेटिभ एसाइली स्टाटस तपाईंमार्फत पाउन सक्नुहुन्न । तर, तपाईंले ग्रीनकार्ड पाइसकेपछि तपाईंको श्रीमतीलाई फेमिली पेटिसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ । तर, तपाईंको श्रीमती आउट अफ स्टाटस भएकाले तपाईंको युएस सिटिजनसिप भएप्छि मात्र उहाँले ग्रीनकार्ड पाउनुहुनेछ ।